Barcelona vs Juventus & Liverpool vs Manchester City - AFARTA Kulan Ee Riyada Iyo Xusuusta Aan La illoobi Karin Ee Dhex Yaala | Laacib.net
Barcelona vs Juventus & Liverpool vs Manchester City – AFARTA Kulan Ee Riyada Iyo Xusuusta Aan La illoobi Karin Ee Dhex Yaala
March 15, 2019 Abdiwahab A. Abeye 0
Waxa si buuxda usoo dhamaystirmay siddeedda kooxood ee iskugu soo hadhay wareegga siddeed dhamaadka Champions League oo qori tuurkiisa la samayn doono Jimcaha maanta.
Ingiriiska ayaa kooxaha ugu badan ku yeeshay oo afar naadi ay usoo baxeen, halka afarta kooxood ee kale ay ka kala socdaan afarta waddan ee Spain, Italy, Portugal iyo Netherlands, kuwaas oo kala ah:
Arrinta xiisaha lihi waa in tartankan ay ka maqan tahay Real Madrid oo afar jeer ku guuleysatay koobkan shantii sannadood ee ugu dambeeyey, sidoo kalena ay Ateltico Madrid oo ay finalka laba jeer timid shantii sannadood ee tagtay ay iyaduna waddada qaadday, taas oo Barcelona oo kaliya kusoo koobtay kooxihii reer Spain.
Marka isku-aadka loo fadhiisto, duhurnimada maalinta Jimcaha oo xaflad lagu qaban doono magaalada Nyon ee ee waddanka Switzerland, waxa lagu ogaan doonaa sida naadiyadu u wada ciyaari doonaan, halkaas oo ay ka bilaabmi doono saadaasha iyo falan-qaynta kooxaha hadba nasiibku afka iska geliyo.
Haddaba, waxaanu halkan idiinku soo gudbinaynaa afarta isku-dhac ee xiisaha ugu badan yeelan doona haddii ay isku beegmaan iyo arrimiha xiisaha u yeelaya.
4. Juventus v FC Barcelona
Sannadkii 2015, FC Barcelona iyo Juventus waxay iskugu soo baxeen ciyaartii finalka ee Champions League, waxaana koobka qaadatay Barca oo caddaysay inay ka awood badan tahay Juve, waxaanay ku kala baxeen 3-1 ay guusha ku qaadatay kooxda reer Spain.
Juventus oo lagu tilmaamo kooxaha ugu difaaca wanaagsan caalamka, sanndkan way ka duwan tahay sidii hore, waxaanay isku samaysay dibu-habayn ay ku kasban karto koobkan kooxaha badan ku dagaallamayaan.
Ciyaarteedii ugu dambaysay waxay ka daba-timid Atletico Madrid oo ciyaartii hore kaga adkaatay 2-0, waxaanay ugu dhiibtay Allianz Stadium 3-0 uu dhamaan goolasha dhaliyey Cristiano Ronaldo.
Bandhigga laacibka reer Portugal ayaa ahaa mid cajiib ah, mar la weydiiyey sida saddexleydu ugu suurtogashayna waxa uu sheegay inay ahayd ujeedadii Juventus usoo iibsatay. Waxa kale oo ciyaartaas xamaasad usii yeeshay gacalisada Cristiano Ronaldo oo garoonka ka dhex oyday markii goolka saddexaad dhashay.
Halka Juve ay wacdaraas muujisay kulankeedii ugu dambeeyey, Barcelona waxay si naxariis la’aan ah u googoysay Lyon oo ay ku jiidhay 5-1, waxaana laba ka mid ah goolasha dhaliyey Lionel Messi.
Marka laga yimaaddo ciyaarta labada kooxood, waxa kale oo kulankan xiiso u yeeli lahaa haddii uu qabsoomo xafiiltanka shaqsiga ah ee Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi oo loollan adag ku dhex mari jiray waddanka Spain, balse halkii uu ka dhamaan lahaa xafiiltankoodu ayuu mar kale kasoo if-baxayaa Champions League.
Inkasta oo dad badan jeclaan lahaayeen in kulankoodu noqdo ciyaarta finalka, haddana inta ka horreysa ayuu midkood tartanka ka bixi karaa, waana sababta Jamaahiirtu haddaba u doonayaan inay weji-ka-weji iskaga hor yimaaddaan.
Guji 2 ilaa 4 si aad u wada akhrisato